के देवीप्रसादलाई आफू श्रीमतिबाटै मा’रिदैछु भन्ने थाहा थियो? ह’त्या हुनु अघि श्रीमतिको बारेमा लेखेको फेसबुक स्टाटसले उब्जायो प्रश्न! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/के देवीप्रसादलाई आफू श्रीमतिबाटै मा’रिदैछु भन्ने थाहा थियो? ह’त्या हुनु अघि श्रीमतिको बारेमा लेखेको फेसबुक स्टाटसले उब्जायो प्रश्न!
काठमाण्डौं, ६ जेठ । आफ्नै श्रीमतिद्धारा मा रिएका विराटनगरका औषधी व्यवसायी देवीप्रसाद दुलालले ह त्या हुनु अघि लेखेको फेसबुक स्टाटसले शंका उब्जाएको छ । अन्य दुई सहयोगीको साथ लिएर श्रीमतिले नै दुलालको ह त्या गरेकी थिइन् । ह त्याको मुख्य योजनाकार श्रीमती मिना श्रेष्ठ दुलाल रहेको र ह त्यामा गर्ने विराटनगरकै ब्रह्मदेव साह र इटहरी १२ खनारका सोनु साह छन् ।
दुईजनाले हत्या गरिरहँदा श्रीमती मीनाले पनि सघाइन् । सास चल्न बन्द भए पनि उनीहरूले ब्रम्हदेव र सोनुले छाड्दैनन् । पेट र शरीरका अन्य भागमा लात्तीले हान्छन् ।
२ बजेपछि सोनु र ब्रम्हदेव निस्किएपछि मीनाले छिमेकी र देवीप्रसादका साथीलाई फोन गरी श्रीमान अ’चेत छन् भन्दै बोलाइन् । एम्बुलेन्समा हालेर गोल्डेन अस्पताल ल्याएका थिए । अस्पतालले मृ’त घोषणा गरेपछि मीना रुन थालेकी थिइन् ।
थप २४ जनामा कोरोना सं क्रमण